20 000 oo baabuur ayaa ku diiwaangashan toban ruux - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawir ka kooban saddex qaybood: Baabuur cusub, goobta gawaarida la dhigto iyo xafiiska hayadda Kronofogden. sawir: Sawirle: Fredrik Sandberg/TT, Jessica Gow/TT.
20 000 oo baabuur ayaa ku diiwaangashan toban ruux
La cusbooneeyay tisdag 13 december 2016 kl 16.22
La daabacay tisdag 13 december 2016 kl 09.26
Deeynta ka diiwaan gashan hayadda sida khasabka ah ku soo celisa deeymaha Kronofogden oo gaartay heerkii ugu sarreeyay.
Deeymaha la xiriira dadyoowga gawaarida leh ee ka diiwaan-gashan hayadda Kronofogden ee khasabka ku soo celisa deeymaha ayaa gaartay heerkii ugu sarreeyay 2,2 bilyan oo koronka iswiidhishka, sida ku cad war-bixin ay hayaddu soo saartay. Kor kacanna ay khaasatan ugu wacan tahay dadyoow gaarsii-san 100 ruux kuwaasina oo af-ka iswiidhishka lagu magacaabo gool-hayaha baabuurta (bilmålvakter).
– Dadyoowgan ayaa deeymaha kaga diiwaan-gashan Kronofogden ey cagacageeyneyaan 400 oo malyan oo koronka iswiidhishka ah, waana mid u dhiganta shan daloolow mid deeymaha hayadda ka diiwaan-gashan guud ahaan. Shakhsiga ugu deeymaha badan ayaa lagu leeyahay 62 malyan oo koronka iswiidhishka, sida uu sheegay Johan Krantz oo ka howl-gala hayadda Kronofogden.
Gool -hayeyaasha baabuurta ayaa inta badan ah dadyoow bulshada ka dhacay, kuwaasina oo lacag xoogaa ah lagu siiyo sidii ey ku ogolaan lahaayeen in baabuur ey leeyihiin dadyoow kale loogu diiwaan gelin lahaa iyo sidii ey kuwa gawaarida lihi uga bax-san lahaayeen masuuliyadda ganaaxyada iyo canshuuraha gawaaridooda. Iyada oo deeymahaasina noqdaan kuwo hayadda iska yaala un.
– Ma ahan arrin wanaag-san in nidaam deg-san sidaa loo isticmaalo. Waa dakhli ka baaqanaya miisaaniyadaha degmooyinka iyo dawladda, sida uu sheegay Johan Krantz.
Deeymaha la xiriira gawaarida ee ka diiwaan-gashan hayadda Kronofodgen ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay heerkii ugu sarreeyey, middaasina ugu wacan tahay habka uu nidaamku iminka u deg-san yahay, hase yeeshee uu Johan Krantz aamin-san yahay inuu isbedel ku dhici doono sannadaha foodda innagu soo haya, maadaama la fileyo in la dejiyo xeer adkeeynaya falalka noocaasi ah.
– Haddii la arko gaari ku baarkingareey-san meel oo mulkiilaha gaariga ku diiwaangashanna lagu leeyahay dayn baarkeerin ee 5 000 gaarsii-san in gaariga meesha laga qaado oo aan dib loo celin illaa iyo inta daynta laga bixinayo. Haddii aanay dhicinna gaariga giddigii la geeyo goobaha lagu qalo gawaarida ama qashinka lagu daro.